HomeSpainSimeone: Guuldaro Qorshaha Uguma Jirto Atletico Madrid
Diego Simeone ayaa ku dardaaray ciyaaryahanadiisa Atletico Madrid inay ka saaraan qorshaha wax guuldaro la yidhaahdo kadib ciyaartii ay dirqiga 1-0 ka kaga badiyeen Valencia oo la joogay garoonkeeda Mestalla.
Guushaan silica ahayd ee ay la soo guryo noqdeen, oo uu horseed u noqday kubad madax ahayd oo uu shabaqa dhigay Raul Garcia qaybtii hore ee ciyaarta, ayaa Atletico ka dhigay inay 6 dhibcood ka horeyso kooxda ugu soo dhaw ee Real Madrid oo ciyaari baaqi u tahay.
Laakiin kulanka ay la leeyihiin kooxda loolanka ba’an ugu jirta horyaalka ee Barcelona oo dhamaan koobabkii kale oo dhan ka soo hadhay ayaa ah mida ugu dambeysa horyaalka ee ay Atletico wajahayso iyadoo marti ku noqonaysa garoonka Camp Nou, tababare Simeone wuxuu maanka ku hayaa in hal simbiririxasho oo ku dhacda kooxdiisu ay sababayso waayida riyadii naadiga ee horyaalka.
“Waxaa na daba boodaya laba kooxood oo waaweyn, anaguna si fudud guuldaro ugu dhici mayno,” ayuu ku yidhi wargeyska Marca kadib guushii Valencia.
“Tani waxay noo ahayd guul muhiim ah. Waxaanu soo bandhignay awood sare, waxaanan ku dagaalanay sidii aanu ku helli lahayn 3 da dhibcood.
Oroodyahan Maxamed Farax (Mo Farah) Oo Iska Fogeeye Arrimaha La Xidhidha Jamaac Karaaciin Oo Lagu Xidhay Dalka Isbaanishka iyo Nuxurka Xadhigisu Ku Salaysan Yahay
21/06/2016 Cabdirisaaq Maxamuud Caalin
Garsooraha dhexdhexaadin doona kulan adag Ee Liverpool iyo Chelsea Oo la shaaciyey
24/04/2014 Khadar Dirir
900 Oo Garan Ayaa Lagu Iibsaday Saacad Gudeheed